Muran Ka Dhashay Saraakiil Ka Tirsan Wasaaradda Maaliyadda Oo Laysku Bedelay, Wasiirka Oo Teleefon Ku Joojiyay Tallaabadaa Iyo Agaasimaha Guud Oo Ka Cadhooday – Araweelo News Network (Archive)
Muran Ka Dhashay Saraakiil Ka Tirsan Wasaaradda Maaliyadda Oo Laysku Bedelay, Wasiirka Oo Teleefon Ku Joojiyay Tallaabadaa Iyo Agaasimaha Guud Oo Ka Cadhooday
Hargeysa(ANN) wasiirka Maaliyadda Somaliland ayaa Telefoon ku horjoogsaday iskubedel uu Agaasimaha Guud ee Wasaaraddiisu ku kala bedelay Agaasime Waaxeedyadda Cashuuraha ee wasaaradda Maaliyadda, kuwaas oo Agaasimuhu u cuskaday isku bedelkooda dar-dar galinta
Dakhliga Miisaaniyadda oo is-dhimay sadex biloodkii ugu danbeeyay iyo natiijada kasoo baxday gudidii loo saaray arrintaa.
Sida ay sheegayaan wararka la xidhiidha isku bedelka lagu samyeeyay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee qaybaha dakhliga ayaa la hakiyay. Kadib markii uu Wasiirka Maaliyadda oo fasax ugu maqan dalka Sucuudigu ka codsaday Agaasimaha in la hakiyo isku bedelkaa, balse wararka ayaa sheegaya inuu Agaasimuhu ku wargeliyay Wasiirka in aanu ku caloolsamayn hakintaa, maadaama oo wasiirku hore u ogaa talaabada agaasimaha.
Sidoo kale wararka shebekada Araweelonews heshay ayaa sheegaya inuu jiro muran u dhexeeya Agaasimaha iyo Wasiirka Maaliyada Eng. Xaashi oo la xidhiidha arrimahaa, isla markaana aan wali xal looma helin muranka ka dhex dilaacay Wasiirka iyo Agaasimaha. Sidaa awgeed aanu ilaa hadana iskubedelkii uu Agaasimaha Guud sameeyay dhaqan galin,. Qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda Maaliyada ayaa ku tilmaamay arrintaa mid saamayn ku yeelan karta hawlaha dakhli ee wasaaradda oo mudooyinkii u danbaysay maraysa meel adag iyadoo uu marka horeba ka dhex jiray khilaaf culus oo sababay inuu Dakhligii la filayay hoos u dhacay, kaas oo dhowaan loo saaray guddi heer qaran ah, iyadoo Agaasimaha Guud ee Maaliyaddu ku sababeeyay isku bedelkaa natiijadii kasoo baxday gudidaa. Balse wasiirka Maaliyadda Eng. Maxamed Xaashi ganafka ku dhuftay.
Nuqulka Qoraalka lagu kala bedelayay shaqaalaha wasaaradda ee uu Agaasimaha Guud soo saaray, balse uu Wasiirka Maaliyaddu ganafka ku dhuftay ayaa u qornaa sidan:-
“jeedo: kala bedel xilalka hoos ku qoran.
Wasaaradda Maaliyadda ee Dalkan dalkan Somaliland oo hada gashay sadex biloodlihii labaad 2aad ee sanadka 2011 (Second Quarter) ayaa is dhimay wax soo saarkii Dakhliga ee bilihii Jan-March 2011 iyadoo ay dhamaan shaqaalaha iyo Madaxda Wasaaraddu u dadaalayeen ayaa hadana ay dhacday in la gaadhi waayo halkii loo baahnaa. Qiimayntii la hor dhigay Golaha Wasiiradda iyo wada tashigii Dawladeed ee arrintaas ku saabsanaa oo loo saaray Guddi uu hogaaminayo Madaxweyne ku-xigeenka JSL ayaa soo saaray go’aamo wax ku ool ah sidii wax looga qaban lahaa hoos u dhaca Dakhliga.
Go’aankaas waxa ka mid ahaa olole cashuur ururineed in la qaado si wax soo saarka loo kordhiyo, ololahaas oo ay taariikhdu markay ahayd 19/04/2011 3-wasaaradood wadajir u qaadeen socona doona illaa muddo si loo helo Dakhligii loo baahnaa.
Hadaba, aniga oo arrintaas ka duulaya ayaan sameeyay isku bedel qaar ka mid ah Madaxda sar-sare ee ilaha dakhliga ee halbowlaha u ah Wasaaradda Maaliyadda. Aniga oo u arka inuu wax weyn soo kordhin doono isbedelkani
Hadaba, waxa la farayaa Madaxda hoos ku qoran inuu masuul kastaaba degdeg uga hawl galo meesha loo bedelay, xilkii hore u hayayna ku wareejiyo Masuulka bedelaya, sidoo kale waxa Madaxda warqadan. Ogaysiinta ku leh laga codsanayaa inay gacan buuxda ku siiyaan wixii kala gudboon Masuuliyiintaas si ay xilkooda u gutaan
Magacyada iyo meelaha loo bedelay
1. Maxamed Ducale Cali Ag/Cashuuraha /Berriga Agaasimaha Qorshaynta
2. Aadn Daa’uud Cigaal Agaasimaha Qorshaynta Agaasimaha W/C/berriga
3. Cali Axmed Bulbul Maamulaha K/berbera Isuduwaha G/Maroodi jeex ee C/berriga
4. Axmed C/laahi Oomaar Isuduwaaha C/G/Maroodi-jeex Maamulaha Kastamka berbera
5. Cumar Xasan Caalin Xarunta W/Kastamka Madaxa baadhista iyo Kormeerka gaobolada galbeed
6. Cilmi Aadan Abokor Xarunta Madaxa Kormeerka Gobolada Bari
7. Khadar Maxamed Cabdi Xarunta ilaa Amar danbe
Jaamac Axmed Maxamed
Agaasimaha Guud EE Wasaaradda Maaliyadda.”
Dhinaca Khilaafka ka dhashay arrintan ayaan la garanayn halka uu Salka ku hayo iyo saamaynta uu ku yeelan doono xilalka masuuliyiintaa, sidoo kale waxaan laa garanayn saamaynta uu ku yeelan doono Dakhligii la filayay maadaama marka horeba hoos u dhac ku yimi sadexdii bilood ee u danbeeyay.